Maxay yihiin cabitaanka ugu fiican ee suxuurta? - Horn Future
Iyada oo la galay bisha barakaysan ee Ramadaan, maxay yihiin talooyinka ugu muhiimsan ee soonka marka loo eego cimilada kulul?Ma dhici kartaa in la sameeyo jimicsi? Ma lagu talin karaa cabitaan gaar ah iyo cunto gaar ah suxuurta?
Su’aalahan ayaa waxa ka jawaabaya guddoomiyaha waaxda caafimaadka gudaha ee Xamad ee dalka Qadar Professor Cabdul Badiic Abu Samra.
Professor Abu Samra ayaa sheegay waxyaabaha ugu fiican ee suxuurta inay kala yihiin kuwan soo socda:
1-Biyuhu waa kuwa ugu fiican,waxana uu carabka ku adkeeyay wakhtiga biyaha la cabbayo in uu ahaado ahaado laga bilaabo wakhtiga aftirka ilaa suxuurta laga gaadhayo, tusaale ahaan, in la cabbo koob biyo ah saacad kasta ama labadii saacadood ba.
2-(Yogurt) caanaha gadhoodhka/ciirta ah oo ku jiraaan maadada( calcium) iyo vitamin “D”.
3-labada nuuc ee Khudaarta,sababtoo ah waxa ku jira ku tiro badan oo biyo ah, waxana ay tahay kayd biyo ah oo uu eeyar eeyar u soo saaro nidaamka dheef-riddiqa ah, taas oo ka caawisaa qofka sooman in uunan dareemin oommanan ama haraad maalintii oo dhan.
Professor ka ayaa sheegay dhibaatada ugu muhiimsan ee uu la kulmo qofka sooman ee ku sugan cimilada kulul inay tahay (engeg/qalal,yaraanshaha dareeraha), gaar ahaan marka ay kulmeen shaqo adag muruqyado,taasoo keenta in uu seego qofku tiro badan oo dareere ah.
Waxa Professor ku uu siiyey dhowr talooyin ah dadka sooman oo ay kamid yihiin:
-In laga fogaado adeegsiga ama isticmaalka nuucyada cabitaanka ee laga sameeyo sharaabka ,sababtoo ah waxa ku jira tiro badan oo ah maadooyinka lagu daryeelo cunta iyo sokor,haddii qofku doonayo wax uu cabbo waa in aqalkiisa uu ku sameeystaa,waxana dhakhtarku uu ku talinayaa in xoogga la saaro cunista midhaha khudaarta ee tooska loo cuno.
-Qof qaba macaanka Nuuca koowaad waxa uu kula talinayaa in uunan soomin.
-Qof qaba nuuca labaada ee macaanka ee sonkortiisa aanan la xakamayn karin waxa kula talinyaa in uunan soomin.
-Jimicsigu waa muhiim, laakiin waxa lagama maar maan ah in uunan sameeynin qofku wakhtiga cilimadu ay kulushashay,waxa loo baahan yahay in dib loo dhigi karo 2 saacadood ka dib afrtirka, ama waxa dhici karta qofku in sameeyo socod wakhtiga aftirka ka hor,marka heerka kuleeylka cimiladu uu hoos u dhaco,ee wakhti gaaban uu ka hadho aftirku.
-Professor ku waxa uu ku taliyay qofku in uu ku aftirto timir sida uu ku taliyay Nabiga (SCW).
-Dhakhtarku waxa carabka ku adkeeyay baahida loo qabo in qofku cuni salaad.
-Waa in qofku iska ilaaliyaa cunista milixda.
« Trump aide sought secret channel with Kremlin: reports	» Maraykan mindi ku dilay 2 nin oo isku dayday inay u hiiliyaan 2 gabdhood oo Muslimiin ah